I-Alt Tags kunye neTayiti yeTekiti yokuSebenza ngeSemalt
Isizathu sokuba abantu bakhethe ukubandakanya imifanekiso kwisicatshulwa kukuqinisa umyalezo oqulethwe kuwo kwaye ukhange abantu ukuba bafunde. UFrank Abagnale, u-8 (Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uthi ufanele uhlale ukhumbule ukufaka iimpawu ze-alt kwiimifanekiso oza kuzenza. Iimpawu ze-Alt kunye neetayitile zandisa itekisi eyaneleyo injini yokukhangela izicaka ukuba zikhawuleze ukuba zandise ukubonakala kwakho. Ithegi ye-alt isishwankathela yonke into oyibonayo kumfanekiso ngamazwi.
Iimpawu ze-Alt kunye neTekisi zeSihloko
Iimpawu ze-Alt kunye nezihloko azithethi ngokwezixhobo kwaye zikwazisa kuphela umxholo kunye nomsebenzi womfanekiso kwiphepha. Abafundi bekrini baxhomekeke kumathegi e-alt ukuze bachaze abantu abangaboniyo nabangabonakaliyo ukuba yintoni umfanekiso - risoluzione strumento di misura digitale.
Ngaloo ndlela, yonke imifanekiso kufuneka iqulethe i-tag tag. Abayakheli kuphela i-SEO yakho kodwa banceda abantu abangaboniyo ukuba baqonde ukusetyenziswa komfanekiso kwisithuba. Iimpawu zecatshulwa azimelwe ukuba zinayo kumanqaku, kodwa zinokuba luncedo kwezinye iimeko. Nangona kunjalo, ukuwashiya ngaphandle akuyi kubuhlungu inqaku lakho.
Abantu abasebenzisa imifanekiso yokwandisa isibheno sibonakaliso sithuba kuphela kufuneka bayeke ukwenza njalo. Isizathu kukuba kufuneka babe kwiCSS kwaye kungekho kwiimpawu ze-HTML. ukuba utshintshe imifanekiso, sebenzisa impawu ezingenanto, ezishiya inkcazo engenanto.kuba abafundi bekrini bafumana umqondiso onobugcisa obunjalo, baya kuwuqhekeza.
I-Alt Text kunye ne-SEO
I-Google igxininisa ukuba abasebenzisi bayo kufuneka benze imibhalo ye-altare kwimifanekiso yabo kuba ibeka ixabiso elikhulu kubo. Umzekelo, ngokokuhlalutya kokuqukethwe kwe-Yoast SEO, kufuneka ube nomfanekiso omnye ngeteksi e-alt ejolise kwigama elingundoqo okanye ibinzana eliya kukwandisa umgangatho weqendu lakho. Nangona kunjalo, njengokuba abasebenzisi benza njalo, akufanele bachithe igama elingundoqo kwi-tag e-alt. Iimpawu ze-alt kunye neetayitile eziqulethe amagama angundoqo kufuneka zihambisane ngezandla eziphezulu kunye nemifanekiso ehambelanayo.
Ukuba kukho igama elingundoqo elingabancedisa abantu ukuba banelisekile kumfanekiso, khumbula ukuyifaka kwi-alt text.
I-Alt kunye neZahluko zezihloko kwi-WordPress
Enye indawo apho ungasebenzisa ithegi ye-alt kunye nesihloko kwimifanekiso elayishwayo kwizithuba zabo ze-WordPress. I-WordPress inika itekiti yetayitili njenge-tag engaguqukiyo e-alt xa umniniyo ekhohlwa ukuba unamathele omnye kwimifanekiso yakhe. Ikopisha iteksi yetayitile kwintetho yesicatshulwa kunye neefestile kwi-tag tag. Kungcono kunokuba ne-alt alt, kodwa kusenamandla ekuphuculeni ukufikeleleka kwesiza sakho.
Thatha ixesha lokudala itekiti yokufundisa e-alt kwaye uyifake kwizithuba zakho zezithombe. I-WordPress isikhombisi singakuvumela ukuba ufake ngesandla isicatshulwa se-alt ngokuchofoza umfanekiso kwaye ukhethe ukuhlela.
Indlela kuphela yendlela umfanekiso we-SEO unokufumana inqaku lakho kunye nezithuba ezalandelayo xa ufumana iinkcukacha ezincinci ngokufanelekileyo. Ukongezelela, awuyi kushiya abantu abangabonakaliyo abavela kumxholo wakho.